Buddhism and Science | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: Buddhism and Science
Posted on May 11, 2016 by chitnge
ဒေါက်တာချစ်ငယ်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ အပိုင်း (၁၃) သိပ္ပံပညာ သိပ္ပံပညာက အားလုံးသိပါတယ် တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ သိပ္ပံပညာက စနစ်ရှိပါတယ် – (Systematization) ပေါ့။ နောက်ပြီး သိပ္ပံပညာက သူတို့ ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တယ် – (Predictability) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံပညာက ဓမ္မဓိဌာန်ကျဖို့ ကြိုးစားတယ် – အဲဒါ (Objectivity) ဆိုတာရှိပါတယ်။ နောက် သိပ္ပံက အမှားအမှန်ကို အစစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတဲ့ Tags: Buddhism and Science, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
Posted on June 29, 2014 by chitnge
သိပ္ပံပညာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုအမွန်းတင်နေတာမျိုးလည်းရှိတယ် သိပ္ပံပညာမှာ – Why do we exist? ကျွန်တော်တို့ ဘာဖြစ်လို့ တည်ရှိနေရလည်း ?? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တော်တော်လေး အရေးပါ အရာရောက်တဲ့ အဓိက မေးခွန်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အထင်အရှား ရှင်းပြပြီးသားပါပဲ။ မသိလို့လိုချင် လိုချင်လို့ပြုလုပ် ပြုလုပ်တော့ ရရှိပြီး ဖြစ်ပေါ်နေရတာပဲဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ။ အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရဆိုတာလည်း ရှိတယ်လေ — မသိလို့ လုပ်မိလုပ်ရာ လျှောက်လုပ်ကြတာပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ သံသရာ လည်ကြတာပေါ့။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts	| Leaveacomment